Qindaa'inoota Agarsiisa Islaayidii
Qindaa'inoota agarsiisa islaayidii keetiif, hiika kam eessa irraa akka jalqabduu, haala islaayidoota keetii ittiin olaansituu, akka kuuwwan pirezenteshiini, fi dirqaloota qaree hunda dabalatee jechuudha.
Agarsiisa Islaayidii - Qindoominoota Agarsiisa Islaayidii filadhu
Agarsiisicha islaayidii keessati islaayidootni kam fa'aan akka haammataman murteessa.
Islaayidoota agarsisaa islaayidii keeti keessa jiran hunda hammata.
Lakkoofsicha islaayidiicha jalqabaa saagi.
Agarsisaa Islaayidii Baratamoo
Akkaataa sadarkiichaAgarsiisa - Islaayidii Agarsiisa - Islaayidii Baratamoo keessa hiikteen agarsiisa islaayidii baratamoo adeemsiisa.
Akaakuu agarsiisiicha islaayidii fili.
Argii guutuun islaayidiicha ni mul'ata.
Agarsiisni islaayidii Foddaa sagantaa LibreOffice keessa hojjata.
Gidduugala gocha afuurafannoo eerga murteesiteen booda agarsiisa islaayidii lamkaasi taasiisa. Afuurfannichi islaayidii islaayidicha maayyii fi jalqabaa gidduuti mula'ata. Agarsiisiichii dhaabsiisuuf furtuu ESC dhibi.
Irra deebi agarsisa islaayidichaan duratti turmaata afuurfannoo galchii. Osso afuurfannoo islaayidii hin mul'isin yeruuma sanitti debi'ee jalqaba.
Asxaa LibreOffice Afuurfannicha islaayidii irratti mul'isa. Asaxiichii jijjiiramuu hin danda'uu.
Islaayidoota huujeekaan jijjiiri
Yemmuu sanduuqnii kuni filatamuu islaayidootni battaluumatti hin jijjiiraman.
Qaree hantuuttee mul'attuu
Yeroo agarsiisa islaayidii qaree hantuuttee mul'isti.
Qaree hantuuttee akka kobbetti
Yeroo pirezanteeshiinichaati akka islaayidii irrattii kasu dsandeesuutti qaree hantuuttee gara kobbetti jijjiira.
Sochiiwwan fakkiinaa haayyamaman
Faayiloota godayyoota sochiiwwan GIF fakkaafaman yeroo agarsiisa islaayidiichaa mul'isa. Yeroo dirqalii kuni filatamuu baate, faayilii godayyiicha duraa sochii GIF fakkaafamee qofaatuu mula'ata.
Duubbee irrattii cuqaasuun islaayidoota jijjiiri
Yemuu duubbee islaayidii irrattii cuqaastuu gara islaayidii itti anutti darba.
Pirezenteshiinii yeroo mara gubbarra
Foodaan LibreOffice yeroo pirezanteeshiinii gubbaa irratti hafa. Sagantaan biroo tokkoleen foodaa isaa pirezanteeshiini keetiin fuula duura hin mul'isu.
Qindaa'inni kuni qindaayina fayyadamiichaa keessa malee keessa galmeetti ol hin kaa'amuu.
Title is: Qindaa'inoota Agarsiisa Islaayidii